စာပေ | Pyay City
Published 02/09/2013 | By Pyay City
တိုင်းပြည်တစ်ပြည်တိုးတက်လာဖို့ဆိုတာ ရေစီးကြောင်းအတိုင်းလိုက်ပါလို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ခေတ်နဲ့လျော်ညီမှန်ကန်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေရှိနေဖို့က အရေးကြီးလှပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေဟာ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေကို အတုယူတတ်ကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အတုယူမမှားကြဖို့တော့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ လွန်ခဲ့သောအချိန်ကာလလောက်မှ ဖွံ့ဖြိုးစနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသာဖြစ်ပါတယ်။
Posted in စာပေ | Leaveacomment
Published 01/09/2013 | By Pyay City
ကျွန်မအနေနဲ့ပြောရရင် လူတွေစာဖတ်ချင်တဲ့အခါ အလွယ်တကူ လာရောက်ဖတ်ရှု ငှားရမ်းလို့ရတဲ့ စာကြည့်တိုက်လေးရှိရင် ကောင်းမှာပဲ။
ဆရာဝန်လုပ်မှာလား ၊ ဈေးရောင်းမှာလား
Published 31/08/2013 | By Pyay City
တလောကကျောင်းနေဘက် ငယ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပြန်တွေ.သည် ။ ကိုးတန်းတုန်းကသူနှင်. အ.ထ.က(၁) ပြည်မြို.မှာ စာသင်ခန်းတစ်ခန်းထဲ၌ ကျောင်းအတူနေဖူး ၊ ပညာဆည်းပူးဖူးသည် ။ သူက ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ။ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်တက်နေစဉ်သူသည် ဆေးကျောင်းသူတစ်ယောက်နှင်.အိမ်ထောင်ကျသွားသလိုလို သတင်းကြားသည် ။ နောက်တော.သူနှင်.ကျွန်တော် အဆက်ပြတ်သွားသည် မှာ နှစ် (၂၀)ခန်.ကြာသည် ။ ပြီးခဲ.သော လကတော.သူနှင်. မမျှော်လင်.ပဲ ပြန်တွေ.သည်။
GTU (သို.မဟုတ် ) စနစ်တစ်ခုရဲ.ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး
Published 24/08/2013 | By Pyay City
တိုင်းပြည်တွင်ဒိထက်အရေးကြီးသောကိစ္စများစွာရှိသဖြင်. ဒီအကြောင်းကိုမရေးတော.ဘူးဟု ကျွန်တော် အကြိမ်ကြိမ်စဉ်းစားသည် ။ သို.သော် တွေ.နေ မြင်နေ ဖတ်နေ ကြားနေရသည်. သဘောထားများက ကျွန်တော်.ကို ဤဆောင်းပါးမရေးပဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်စေသည် ။ ကိစ္စကတော. အများသူငါပြောကြားနေကြသော နည်းပညာတက္ကသိုလ် (သံလျင် ) မှ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားစုံတွဲတစ်တွဲ၏ အတွင်းရေး ပေါက်ကြားမှု (တနည်းပြောရလျင် ) ချိန်းတွေ.စဉ် ဗီဒီယို ခိုးရိုက်ထားသော မှတ်တမ်းပေါက်ကြားမှုဖြစ်သည်။
Published 07/08/2013 | By Pyay City
အတိတ်သို.နောက်ပြန်သွားခြင်း (Part III )
ပြည်မြို.တွင် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးရုပ်သိမ်းလိုက်သည်နှင်. လူတို.သည် ပြည်မြို. ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျောက်ရုပ်အ၀ိုင်းကြီးတွင် စုမိ ကြပြီးနောက် လက်သီးလက်မောင်းတန်း၍ ကြွေးကြော်သံများကိုအော်ဟစ် ကြကာ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမကြီးအတိုင်း ရွာဘဲရပ်ကွက် ဘက်ဆီသို. ချီတက်ခဲ. ကြပါသည် ။ ကျွန်တော်တို.သည် လမ်းတစ်လျှောက်လုံးတစ်ယာက်ကတိုင် တစ်ယောက်ကဖောက်ဖြင်. စိတ်ကူးပေါက်သမျှ အစိုးရဆန်.ကျင်ရေးစကားများကို ပြောဆိုရေရွတ်ကြွေးကြော်ကြပြီးတရွေ.ရွေ.နှင်. ရွာဘဲရပ်ကွက်ရှိ ပြည်မြို.နယ် ပါတီယူနစ်ရုံး (မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီရုံး ) ရှေ.သို.ရောက်လာကြပါသည် ။